LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja 20.5.430 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 20.5.430 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အေႂကြေစ့ထည့္ ကစားရေသာ ဂိမ္းခံု LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
တိုက်ပွဲအခမဲ့အသစ်သော Ninja ကိုပြိုင်ပွဲတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းထဲမှာNINJAGO®စီးတီးကနေတဆင့်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေ - LEGO®NINJAGO®။ စီးနငျးတိုကျခိုကျ Ninja Zane လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်သွားပြီနှင့် Garmadon ၏သားထိုးဖောက်မှုထားပါတယ် - အန္တရာယ်များတဲ့ရာဇဝတ်မှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် biker ဂိုဏ်းအတွက် NINJAGO®စီးတီး။ အဆိုပါတိုက်တေနီယမ် Ninja ဂိုဏ်းမှတက်သည်အဘယ်အရာထွက်ရှာရန်မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်တယ်, လုနီးပါးဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရရှိခဲ့ပြီးပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်ဖြစ်လာဖို့တစျခုနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုရှောက်သွားရန်လိုအပ်ပါသည်ထားပါတယ် - သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်စတင်ပြိုင်ပွဲရှင်သန်, မြွေ Jaguar ကို၏ Street, Race,
Zane, LEGO®NINJAGO®အဖြစ်ကစား: စီးနငျးတိုကျခိုကျ Ninja တစ် All-action ကို Ninja ကိုတိုက်ခိုက်ရေးပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခု NINJAGO ထား, shuriken တပ်ဆင်ထားသည်သူ၏စူပါအေးစက်ဘီး၏ထိုင်ခုံပေါ်တွင်သင်ထိုင်တော်မူ၏။ Zane ကဒီပြိုင်ပွဲမပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်အဖြစ်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်သွားသည်နှင့် biker ညစ်ပတ်ကစားရန်ကြိုက်နှစ်သက်သိတယ်။ Garmadon ၏သား Chase ပေး - အချို့သောစီးဆိုင်ကယ်, Ultra ဗိုင်သူမ၏ကျောက်ခေတ် Booster စက်ဘီးစီးနှင့်မစ္စတာအီးရဲ့ devilish ONI ဆိုင်ကယ် spikes နှင့်အတူသေစေနိုင်သောခုတ်ဓါးသွားရှိပါတယ်!
သင့်ရဲ့ device ကိုစောင်းနေဖြင့် NINJAGO စီးတီးအသွားအလာကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း, ရိုးပေါ်လေထုအရ, ပေါက်ကွဲစေတတ်သောမိုင်းများရှောင်သူတို့သည်သင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မတိုင်မီ Garmadon ၏သားတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်သင့် Ninja ကိုကျွမ်းကျင်မှုသုံးစွဲဖို့ screen ကိုထိပုတ်ပါ! Pickup ကျန်းမာရေး restore နှင့်တိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်အထူးတိုက်ခိုက်ပေးခြင်းအာဏာတိုးမြှင့်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ play အဖြစ်LEGO®လုံးရရှိခဲ့ကြသည် - သူတို့နက်နဲသောအရာလက်နက်များမြှင့်တင်ရန်အဆင့်မြှင့်ကတ်များဆံ့ကြောင်းအိတ်, သံချပ်ကာ, ကျန်းမာရေးအပေါ်သုံးစွဲနှင့်အထူးစွမ်းရည်ပေးနိုင်ပါသည်။ LEGO®လုံးကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်ကဒ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အိတ်ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လောက်ဝေးသငျသညျစီးနငျးတိုကျခိုကျ Ninja အတွက် Race နိုင်မလဲ?
✫ Fast-PACE Race: Zane ရဲ့အေးမြဆိုင်ကယ်ပေါ်စတင်ကာအခြားစက်ဘီး In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်သော့ဖွင့်နိုင်ပါသည်
✫ထား & SHURIKEN Combat: တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ဆိုင်ကယ်စီးနင်းကျွမ်းကျင်မှု၏ Timing အောင်မြင်ဖို့မရှိမဖြစ်များမှာ
✫အပန်းဖြေ EPIC မြင်ကွင်းများ: အဆိုပါစီးနင် Ninja ဂိမ်း Spinjitzu တီဗွီရှိုးများ NINJAGO မာစတာကနေမြင်ကွင်းများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေသည်
ကဒ်များ upgrade ✫: 50+ Zane ရဲ့လက်နက်, သံချပ်ကာ, ကျန်းမာရေးနှင့်အထူးစွမ်းရည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်အားပေးဘို့ကတ်များ upgrade
✫ in-app purchases: တစ်ခုတည်း In-app ကိုဝယ်ယူမှတဆင့်သင်သုံးနောက်ထပ်စက်ဘီး, ခြောက်လ katana ဓားတစ်ဦးအပိုအဆင့်မြှင့် slot ကသော့ဖွင့်နှင့်သင့် Lego လုံးနှစ်ဆနိုငျပါသညျ!
✫အသက်အရွယ်အလိုက်: ငယ်ရွယ်သောကစားသမား, ဟာသစာရေးနှင့်အတူအဟောင်းများကစားသမားအလိုလိုသိအညွှန်းနှင့်သင်ခန်းစာအဘို့အပြည့်အဝ-featured ဂိမ်းချိန်ညှိဂိမ်း!
✫လုံခြုံမှုမှာ FIRST: NO Third-party ကြော်ငြာနှင့်အတူ, လုံခြုံ, တံခါးပိတ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် Play ။ Lego စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသားသမီးရဲ့ဖန်တီးမှုကစားဖှယျ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်, Lego ထုတ်ကုန်ဥပမာအားဖြင့်လင့်များအဘို့, တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်
app ကိုထောက်ခံမှုအဆက်အသွယ် Lego စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုသည်။ အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကို http://service.LEGO.com/contactus ရည်ညွှန်းများအတွက်
Lego က, Lego လိုဂို, NINJAGO နှင့် Minifigure ယင်း Lego Group ၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
© 2018 အဆိုပါ Lego Group မှ။
ဘာကြောင့် Lego NINJAGO နှင့်အတူဆော့ကစား?
Lego NINJAGO ကောင်းသောဒုစရိုက်, ခြောက်လငယ်ရွယ် Ninja ကိုတစ်စုတစ်ဝှမ်းဗဟိုပြု, ကို elemental အင်အားကြီးနှင့်အတူအသီးအသီးများနှင့်အဟောင်းများကိုမာစတာဝူ၏နိုင်စွမ်းလက်၌၎င်းတို့၏လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုစွဲငြိဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်အတုနှင့်မကောင်းသောအရန်သူများကို NINJAGO ကျွန်းမှငြိမ်းချမ်းရေးကိုရောက်စေဖို့သူတို့ရဲ့တိုက်ပွဲများအတွက်ရှုံးနိမ့်ကြသည် - အမြဲအန္တရာယ်, တီထွင်ဖန်တီးမှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရုပ်ပြကယ်ဆယ်ရေးတစ်ဦးမျှတသောရောနှောအတူ။ တောင်မှရန်သူများကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်မိတ်ဆွေများကတစ်ခါတစ်ရံအမှားတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်နည်းတူ, မိတ်ဆွေများဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအခန်းကဏ္ဍ-ကစားအခွင့်အလမ်းများကိုအဆုံးမဲ့များမှာ - နီးပါးဘာမှဒီစိတ်ဝင်စားဖွယ်, ဖန်တီးမှုဝဠာတှငျတတ်၏။
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja အား အခ်က္ျပပါ
discorally စတိုး 205 123k
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 20.5.430
လက်မှတ် SHA1: B7:17:9D:AE:1B:6E:E3:80:98:A1:89:D6:0A:EA:27:53:7B:F4:3F:2A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): www.lego.com
အဖွဲ့အစည်း (O): LEGO System A/S
နယ်မြေ (L): Aastvej 1 DK-7190 Billund
LEGO® NINJAGO®: Ride Ninja APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ